63% Muwaadiniinta Kenya Oo Doonaya In Ciiddankooda Laga Soo Saaro Gudaha Somalia.
Sahan Ra’yi Ururin oo ay Waaxda Cilmi-baarista ee Idaacadda “The Radio Africa Research department “ dhex dhigtay Dadka Kenyanka ayaa waxay 63% sheegeen inay doonayaan in Ciiddanka Kenya laga soo daad-gureeyo Hawlgalka ay u joogaan gudaha dalka Somalia.
Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in 37% Dadka Reer Kenya inay doonayaan inay Ciiddanka sii joogaan Somalia iyo inay sii wadaan La-dagaalanka Xarakadda Alshabaab.
80% Cod-ururinta oo laga qaaday 2,000 oo qof ayaa waxay Dowladda Kenya ugu baaqeen inay si sharaf leh u shaaciyaan Khasaaraha Ciiddanka Kenya ka soo gaaray Weeraradda ay Dagaalamayaasha Alshabaab la beegsadeen.
Sidoo kale, 80% waxay sheegeen inaysan rumeysanayn Tiradda ay Dowladda ka soo saartay Ciiddankii Kenyanka ee lagu dilay Weerarkii Alshabaab bishii hore ku qaadeen Xeradda Kul-biyow.
Sidoo kale, Dowladda Kenya waxay weli diidan tahay inay shaaciyaan Khasaarihii Ciiddankooda ka soo gaaray Weerarkii Alshabaab ay bartamihii bishii Janaayo ee sannadkii hore la beegsadeen Ciiddankii Kenya ee joogay Xeradda Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa isa soo tarayo Baaqa ku aadan inay Ciiddanka Kenya laga soo daad-gureeyo Somalia oo ay galeen bishii October ee sannadkii 2011-kii.